5 Agatha Christie Novels Iwe Unofanira Kuverenga | Zvazvino Zvinyorwa
5 inofanirwa-kuverenga Agatha Christie novels
Joaquin Garcia | | Vanyori, Novela
Nhasi kunopembererwa yegore regumi nemana rekuzvarwa kwaAgatha Christie. Onomastic kutanga kurangarira mabasa emambokadzi mukuru wekufungira. Zvisinei, basa raAgatha Christie rakakura uye rakasiyana, uko Hercule Poirot haasi iye oga mutungamiriri anotungamira.
Tichitora mukana wezuva, isu takaona zvakakodzera kukuudza nezvazvo iwo mashanu anofanira-kuverenga anoshanda kana iwe uchida kuziva basa raAgatha Christie. Ehezve, aya mabasa anosarudzwa nenzira yemunhu, saka pamwe unogona kusarudza mamwe mabasa kana kufunga kuti takavhiringidzika, mune chero zvakadaro rangarira izvozvo iyi sarudzo ndeyako uye yemahara, akasununguka kutevera kana kuramba.
5 enganonyorwa naAgatha Christie
Kuuraya kwaRoger Ackroyd. Iyo ndeimwe yepamusoro inoshanda kupi Hercule Poirot anoonekwa. Yakabudiswa muna 1926, Kuuraya kwaRoger Ackroyd inoramba ichibudirira. Muna 2013 akahwina mubairo weakanakisa matikitivha. Iyo inoverengeka iri yezverudo Triangle inoitika paKing's Abbott. Roger Ackroyd ndiye muromo wepatatu uyu kuti akaurayiwa mushure mekudzidza kuti mudzvanyiriri wemudiwa wake ndiani. Akarega basa Hercule Poirot atooneka mune iri basa uye acharamba akadaro kusvika kumagumo emabasa aAgatha Christie.
Kufa muVicarage. Agatha Christie akaburitsa iri basa muna 1930. Kukosha kwaro kuri muchokwadi chekuti mune ino novel anopa mumwe wevanonyanya kudiwa nemunyori nevateereri vake. Vhura Kufa muVicarage inoonekwa kekutanga Miss Jane Marple mune inoverengeka. Mukadzi akwegura uyu anofarira kufungira uye zvakavanzika. Mumabhuku gumi nematatu Miss Marple achaedza kugadzirisa zvakavanzika zvaakapihwa, Kufa muVicarage ndeimwe yezviitiko izvi.
Gumi maNigritos. Ndiro rimwe remabasa anotengesa zvakanyanya, ane mabhuku anodarika zana miriyoni akatengeswa, rebasa raAgatha Christie uye hazvisi zvishoma nekuti nderimwe remabasa ane zvimwe zvirongwa, zvakavanzika uye kuuraya kuripo. Iyo inoverengeka inotaurira nyaya yevanhu gumi vanopara mhosva uye vanotiza kururamisira. Gare gare vanhu ava vanobatanidzwazve pachitsuwa uye zvinoshamisa kuti vanofa mumwe nemumwe, zvichienderana nezvikamu zve rwiyo rwekare.
Kutsiva kwaNofret. Agatha Christie aifarira Archaeology uye Middle East. Iyi inova ndiyo iyo chete inotamira kuIjipita yeIjipita. Imhotep mupirisita anobva kuEgypt uyo achangobva kutora mwanasikana wake uyo ave chirikadzi asi achaunzawo murongo mutsva, Nofret, uyo anokanganisa mhuri kubva mumakaro nesimba.
Husiku husingaperi. Uyu mutambo wakatsikiswa mu1967 uye nyeredzi Michael Rogers, jaya rinofarira kurarama munguva uye risina hurongwa hweramangwana. Mune iri basa, Rogers ane shungu nezve mukadzi, Ellie Guteman, uye nenzvimbo, Campo del Gitano. Mushure memuchato wavo, Ellie anotambura tsaona isinganzwisisike kwaanofa. Zvese zvakakomberedzwa nyika yesoteric inopa chimiro chekare Esteri. Iri basa rakavakirwa panhetembo yaWilliam Blake, Zvikuru zvekusachena.
Kana chero ripi zvaro remabasa rakabata pfungwa dzako, mune zvinotevera zvinongedzo ( Kuuraya kwaRoger Ackroyd ,Kufa muVicarage, Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa., Kutsiva kwaNofret, Husiku husingaperi) unogona kuwana aya mabasa kuti unakirwe. Zvikasadaro, ingokuudza iwe kuti usakanganwe munyori mukuru wenyanzvi yekuongorora uye kuti zvirokwazvo rimwe basa rinokwezva kutarisisa kwako, iye akanyora anopfuura makumi matanhatu nenomwe enoverengeka, saka pachave nemamwe, haufunge?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » 5 inofanirwa-kuverenga Agatha Christie novels
"Sero revasina mhosva", bhuku rinoisa tarisiro yazvino yevasungwa protocol paGender Violence kuSpain
Iye zvino iri kutengeswa "Wese iwo moto", iyo yekupedzisira kubva kuEngeles Caso